Q သောသူ နှင့် ချစ်သောသူကို ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်…. - Amawpyay
Q သောသူ နှင့် ချစ်သောသူကို ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်….
Q သောသူ – ညသန်းခေါင် မင်းဆီဖုန်းဆက်ပြီး ညဥ့်နက်သည်အထိ ဖုန်းပြောတတ်တယ်။
ချစ်သောသူ – သင့်ကို ညသိပ်မနက် ဖို့ပြောလိမ့် မယ်။
Q သောသူ – သူကမင်းကို လုပ်စရာရှိတာ မလုပ် ခိုင်းဘဲ သွားလည် ဖို့ခေါ်လေ့ ရှိတယ်။
ချစ်သောသူ – သူကမင်းကို အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ် ဖို့လောဆော်နေ လိမ့် မယ်။
Q သောသူ – မင်းနေမကောင်းချိန်မှာ၊ နားဝင်ချိုတဲ့ စကားတွေပြောပြီး မင်းကို ဂရုစိုက်ပြလိမ့်မယ်။
ချစ်သောသူ – မင်းနေမကောင်း ချိန်မှာ၊ သူ့ဂရုစိုက်မှုတွေက စိတ်ရှုပ်လောက်အောင် ကို ရှိပြီး ဆရာဝန် အတင်း သွားကြည့်ခိုင်း တတ် တယ်။
Q သောသူ – သူကမင်းကို စကားအကောင်းတွေပြောပြီး မင်းရဲ.နှစ်သက်မှုကိုရယူဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိတယ်၊ မင်းကလဲ ဒါကိုဘဲ မွေ့လျော်နေ တတ်တယ်။
ချစ်သောသူ – သူပြောသမျှ စကားတွေက မင်းကို ဂရုစိုက်တဲ့ စကားတွေဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် မင်းကို အမိန့်ပေးတာမျိုးနဲ့ ပြောလေ့ ရှိတယ်။
Q သောသူ – သူကမင်း အလိုကို လိုက်တတ်ပြီး မင်းပျော်နေရင် ရပြီ။
ချစ်သောသူ – သူကမင်းကို အမှားအမှန်တွေ ခွဲခြားပြတတ်ပြီး မင်းကတော့သူ့ကို တော်တော်လျှာရှည်တတ်သူလို့ သတ်မှတ် တတ်တယ်။
Q သောသူ – သူကမင်းကို အပျော်ဆုံးပေးမယ်လို့ ပြောလေ့ရှိတယ်။
ချစ်သောသူ – သူကတော့ မင်းကို သူနဲ့အတူရှိနေခြင်းဟာ သူ့ရဲ. အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ဆိုတာကိုဘဲ ကတိပေးလိမ့်မယ်။
Q သောသူ – သူက မင်းရဲ. လှုပ်ရှားမှု အသေးစိတ်ကို သတိထားလိမ့်မယ်၊ မင်းမှားတာလုပ်မိရင်တောင် မင်းကို ထောက်ပြမှာ မဟုတ်ဘူး။
ချစ်သောသူ – သူက မင်းရဲ. လုပ်ပုံကိုင်ပုံ ကို သတိထားပြီးဘယ်နေရာမှာ မှားနေလဲဆိုတာကို ထောက်ပြ လိမ့်မယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လို လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရမှာကို ပြောပြလေ့ရှိတယ်။
Q သောသူ – မင်းဘာလုပ်နေသလဲ၊ ဘယ်သူနဲ့ တွဲနေသလဲဆိုတာကို ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ချစ်သောသူ – မင်းဘာတွေလုပ်နေသလဲ၊ ဘယ်သူနဲ့တွဲနေလဲ ဆိုတာကို အရမ်းအလေးထားတတ်ပြီး မင်းကို ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ မပေါင်းသင့်ဘူးဆိုတာကို သတိပေးတတ်တယ်။
Q သောသူ – သူကအခုချိန်ကိုဘဲစဉ်းစားတယ်။
ချစ်သောသူ – သူကရှေ့ရေးကိုတောင်မျှော်မှန်းနေပြီး မင်းစိတ်ချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ ဆိုတာကို တွေးခေါ် တတ်တယ်။
Q သောသူ – သူက ငါမင်းကို ကြိုက်တယ်လို့ ပြောလေ့ရှိတယ်။
ချစ်သောသူ – သူကတော့ ငါမင်းကိုချစ်တယ် လို့ ပြောတတ်တယ်။
တကယ်လို့မင်းသာ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်ခဲ့ဖူးတယ် သို့မဟုတ် ချစ်ခံ ခဲ့ ရဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာတွေဟာသိပ်ကို မှန်ကန် တယ်လို့ ခံစား ရပါ လိမ့်မယ်။
Credit : HZ Zane
Q သောသူ နှငျ့ ခဈြသောသူကို ကှဲကှဲပွားပွား သိဖို့တော့လိုလိမျ့မယျ….
Q သောသူ – ညသနျးခေါငျ မငျးဆီဖုနျးဆကျပွီး ညဉျ့နကျသညျအထိ ဖုနျးပွောတတျတယျ။
ခဈြသောသူ – သငျ့ကို ညသိပျမနကျ ဖို့ပွောလိမျ့ မယျ။
Q သောသူ – သူကမငျးကို လုပျစရာရှိတာ မလုပျ ခိုငျးဘဲ သှားလညျ ဖို့ချေါလေ့ ရှိတယျ။
ခဈြသောသူ – သူကမငျးကို အလုပျကောငျးကောငျးလုပျ ဖို့လောဆျောနေ လိမျ့ မယျ။
Q သောသူ – မငျးနမေကောငျးခြိနျမှာ၊ နားဝငျခြိုတဲ့ စကားတှပွေောပွီး မငျးကို ဂရုစိုကျပွလိမျ့မယျ။
ခဈြသောသူ – မငျးနမေကောငျး ခြိနျမှာ၊ သူ့ဂရုစိုကျမှုတှကေ စိတျရှုပျလောကျအောငျ ကို ရှိပွီး ဆရာဝနျ အတငျး သှားကွညျ့ခိုငျး တတျ တယျ။
Q သောသူ – သူကမငျးကို စကားအကောငျးတှပွေောပွီး မငျးရဲ.နှဈသကျမှုကိုရယူဖို့ ကွိုးစားလရှေိ့တယျ၊ မငျးကလဲ ဒါကိုဘဲ မှလြေ့ျောနေ တတျတယျ။
ခဈြသောသူ – သူပွောသမြှ စကားတှကေ မငျးကို ဂရုစိုကျတဲ့ စကားတှဖွေဈပွီး အမြားအားဖွငျ့ မငျးကို အမိနျ့ပေးတာမြိုးနဲ့ပွောလေ့ ရှိတယျ။
Q သောသူ – သူကမငျး အလိုကို လိုကျတတျပွီး မငျးပြျောနရေငျ ရပွီ။
ခဈြသောသူ – သူကမငျးကို အမှားအမှနျတှေ ခှဲခွားပွတတျပွီး မငျးကတော့သူ့ကို တျောတျောလြှာရှညျတတျသူလို့ သတျမှတျ တတျတယျ။
Q သောသူ – သူကမငျးကို အပြျောဆုံးပေးမယျလို့ ပွောလရှေိ့တယျ။
ခဈြသောသူ – သူကတော့ မငျးကို သူနဲ့အတူရှိနခွေငျးဟာ သူ့ရဲ. အပြျောရှငျဆုံးအခြိနျဆိုတာကိုဘဲ ကတိပေးလိမျ့မယျ။
Q သောသူ – သူက မငျးရဲ. လှုပျရှားမှု အသေးစိတျကို သတိထားလိမျ့မယျ၊ မငျးမှားတာလုပျမိရငျတောငျ မငျးကို ထောကျပွမှာ မဟုတျဘူး။
ခဈြသောသူ – သူက မငျးရဲ. လုပျပုံကိုငျပုံ ကို သတိထားပွီးဘယျနရောမှာ မှားနလေဲဆိုတာကို ထောကျပွ လိမျ့မယျ။ ဘယျနရောမှာ ဘယျလို လုပျရမယျ၊ ဘယျလို လူတှနေဲ့ ဆကျဆံရမှာကို ပွောပွလရှေိ့တယျ။
Q သောသူ – မငျးဘာလုပျနသေလဲ၊ ဘယျသူနဲ့ တှဲနသေလဲဆိုတာကို ဂရုစိုကျမှာမဟုတျဘူး။
ခဈြသောသူ – မငျးဘာတှလေုပျနသေလဲ၊ ဘယျသူနဲ့တှဲနလေဲ ဆိုတာကို အရမျးအလေးထားတတျပွီး မငျးကို ဘယျလိုလူတှနေဲ့ မပေါငျးသငျ့ဘူးဆိုတာကို သတိပေးတတျတယျ။
Q သောသူ – သူကအခုခြိနျကိုဘဲစဉျးစားတယျ။
ခဈြသောသူ – သူကရှရေ့ေးကိုတောငျမြှျောမှနျးနပွေီး မငျးစိတျခမျြးသာအောငျ ဘယျလိုကွိုးစားရမလဲ ဆိုတာကို တှေးချေါ တတျတယျ။
Q သောသူ – သူက ငါမငျးကို ကွိုကျတယျလို့ ပွောလရှေိ့တယျ။
ခဈြသောသူ – သူကတော့ ငါမငျးကိုခဈြတယျ လို့ ပွောတတျတယျ။
တကယျလို့မငျးသာ တဈယောကျယောကျကို ခဈြခဲ့ဖူးတယျ သို့မဟုတျ ခဈြခံ ခဲ့ ရဖူးတယျဆိုရငျတော့ ဒီစာတှဟောသိပျကို မှနျကနျ တယျလို့ ခံစား ရပါ လိမျ့မယျ။